China mobile prefab ígwè akpa ụlọ maka nkwari akụ ma ọ bụ ogbako ma ọ bụ dormitory rụpụta na Factory | Yi'an
mobile prefab ígwè akpa ụlọ maka nkwari akụ ma ọ bụ omumuihe ma ọ bụ obibi
Ezubere modular obere akpa ụlọ dị ka nkọwa nke mbupu akpa kpọmkwem. Ejiri prefab nchara mee ya dị ka ụlọ na sandwich maka mgbidi na elu ụlọ, wee jiri windo, ibo ụzọ, ala, elu na ngwa ndị ọzọ rụọ ọrụ. Ha na-e ruo eruo na ọtọ akpa ụlọ ngwa. Ngwongwo ụlọ ndị a na-ebufe ma dị mma ibi na nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide.
Ezubere modular obere akpa ụlọ dị ka nkọwa nke mbupu akpa kpọmkwem. Ejiri prefab nchara mee ya dị ka ụlọ na sandwich maka mgbidi na elu ụlọ, wee jiri windo, ibo ụzọ, ala, elu na ngwa ndị ọzọ rụọ ọrụ.
Ha na-e ruo eruo na ọtọ akpa ụlọ ngwa. Ngwongwo ụlọ ndị a na-ebufe ma dị mma ibi na nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide.
Ha na-ruo eruo na ike na ọkụ na ike ga-accessorized ona gị chọrọ.
Ularlọ Modular a na-arụ ọrụ maka ịrụ ebe a na-ewu ewu ma sie ike iji nye ndị ọrụ ohere. Oghere dị n'ime buru ibu iji jide arịa dị mkpa. Na ọ dị mfe na ngwa ngwa iji wụnye na disassembled. Chekwaa oge na ego maka gị. Enweghị mkpa ịzụta ala, naanị mkpa ịgbazite ya. Yabụ enweghị nrụgide ego. Gini na igha anwa ma gosi ndu gi nke uto?
A na-etinye ha na ụlọ nkwakọba ihe, nchekwa, ebe obibi, kichin, ime ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ mkpuchi, ime ụlọ nzukọ, klaasị, ụlọ ahịa, ụlọ mposi a na-ebugharị, igbe mbata, kiosk mkpanaka, ụlọ mposi moblie, ụlọ ndina, nkwari akụ, ụlọ nri, na ụlọ obibi, nwa oge. office, obibi nke na-ewu, post iwu oge, ụlọ ọgwụ, ime ụlọ erimeri, ubi na n'èzí na-arụ ọrụ ọdụ na na na.
Akpa Uru Houselọ
* Adaba na njem dị iche iche, enwere ike ibufe ya dị ka akpa mbupu, ma ọ bụ na-ebu ibu.
* Ọ dị mfe iwepụ maka obere oge, enwere ike ịkwaga ebe ọzọ na-ebusasịghị.
* Siri ígwè Ọdịdị mma ifufe na-eguzogide ọgwụ, na seismic eguzogide ọgwụ.
* Sanwichi obubọk maka mgbidi na ụlọ na-ezi mkpuchi, soundproof, waterproof.
* Mgbanwe aghụghọ dị ka mmasị gị.
* Gburugburu ebe obibi. Ọ dịghị ihe a ga-atụfu.
* Akụkụ ụlọ nwere ike ịdị iche iche dịka ihe ị chọrọ.
* Obere ihe achọrọ na ala. N'ịbụ siri ike na ewepụghị bụ OK.
Arụ Ọrụ Nrụpụta 2 na-arụ ọrụ n'otu ụbọchị maka otu ngalaba
Ogologo ndụ Ihe karịrị afọ 30
Ibu ụlọ 0.5KN / sqm (nwere ike ime ka usoro ahụ dịkwuo ike)
Ọsọ ikuku > 240km / h (ọkọlọtọ ndị China)
Seismic eguzogide Ebube 8
Okpomọkụ Ọnọdụ okpomọkụ dị mma. -50 Celsius ~ 50 ° C
Ngalaba zuru ezu:
Mgbidi na Ulo Materils: Ogwe Sanwichi
Nhazi: steellọ ụlọ dị nchara nchara
Window: Aluminom alloy window ma ọ bụ Plastic nchara window
Ọnụ ụzọ: Aluminium etiti sandwich ụzọ ụzọ.
Nha: 20 ụkwụ; Feetkwụ iri anọ
Oge ịkwụ ụgwọ: 40% T / T, megide iwu na nguzozi a kwụrụ tupu nnyefe.
Oge Mbuga ozi: N'ime otu ọnwa mgbe enwetachara ụgwọ gị zuru oke.
Mpụga mpụga 6058mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) / 12116mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) Nke a
Cornerlọ nkuku Prefabricated ọkụ nchara
Panellọ panel Rock Wool / EPS sandwich panel (dị ka ndị ahịa chọrọ)
panel Rock Wool / EPS sandwich panel (dị ka ndị ahịa chọrọ)
Ndabere ala Prefabricated ọkụ nchara
ngwa Windo 3 / PVC windo na-agba ọsọ
Ọnụ ụzọ 1 / 50mm sreel sandwich panel
Ilinggha Ugbo PVC n'uko
Nhọrọ ngwa Ngwá ụlọ maka ụlọ obibi, ụlọ ọrụ, ebe obibi, Tolọ mposi, Kitchen, athlọ ịwụ, ịsa ahụ, wdg.
Ngwa ụlọ obibi, ọfịs, ebe obibi, ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ ahịa, ụlọ ndozi, kiosk, ụlọ nzukọ, kantiin, wdg.
Nzọụkwụ Nwụnye lọ E Mere
Anyị ga-enye gị ntuziaka ntuziaka zuru oke yana ọmarịcha ọrụ azụmaahịa. Maka ọrụ pụrụ iche, anyị nwekwara ike iziga injinia anyị iji nyere gị aka iji afọ ojuju banye.
2, Ntọala, nwere, dika ntọala brik na ntọala ya
3, Nhazi ngwongwo ígwè
4, Ọ bụrụ na ọtụtụ ala, echichi nke precast n'ala slab
5, Agba nchara efere arụnyere
6, Ngwakọta nke mbụ nke ala
7, Ọnụ ụzọ na nwụnye Windows
8, Ime ụlọ mma
Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., LTD ụlọ ọrụ bụ otu n'ime mma-ụlọ ọrụ nwere na pụrụ iche na n'ichepụta iche iche prefab ụlọ na akpa ụlọ na ezi mma na asọmpi price. Co-nyekwara ego site na Shandong Qingyun Xinda Color Steel Structure Engineering Co., Ltd., nke hiwere na afọ 2003. Ihe karịrị ndị ọrụ R&D 50 na ndị ọrụ karịrị 400 na-akwado anyị iji nweta oke ahịa ahịa. Anyị ụlọ ọrụ bụ a elu-tech mmepụta na-abara enterprise na a zuru ezu usoro maka ígwè Ọdịdị mmepụta na echichi, ụlọ ọrụ nwetara mba quality akwụkwọ nke ISO9001 na Steel Structure Construction iru eru Asambodo ọkwa II.
Anyị nwere nza nke oru ngo n'ụlọ na mba ọzọ, anyị ahịa olu na Philippines ahịa bụ NO.1, anyị bụ ndị kasị mma na ndị kasị pụrụ ịdabere na soplaya na mpaghara ebe a, na anyị bụ ndị kasị elu 3 soplaya na Pakistan na Sudan. oru na Dubai, Oman, Uzbekistan na obodo ndi ozo. Ihe karịrị 80% nke ngwaahịa anyị bụ mbupụ ụwa, dịka Australia, South America, Europe, America, South Africa, North Africa, Asia, Middle East, na mba ndị ọzọ na mpaghara
* Okirikiri nhọrọ ukwuu atụmatụ nwere ike e mere ma ọ dị mkpa.
* Ntinye ntinye / CD / ntinye ntinye ga-enye ma ọ dị mkpa.
* Enwere ike izipu ndị injinia na ndị ọrụ na mba ofesi maka ntụzịaka na nrụnye.
* Ọkachamara ndị injinia maka ndụmọdụ na nyocha.
Nke gara aga: prefabricated ewepụghị mkpọ aku akpa ụlọ ibi na kichin
Osote: Standard Prefabricated Mbupu akpa House N'ihi Home
prefabricated ewepụghị mkpọ aku akpa hous ...
Prefab modular akpa House Cabin House N'ihi na ...
Standard Prefabricated Mbupu akpa House ...
Ndị na-arụ ọrụ ebe obibi Container Container On Constructio ...